အမှိုက်က ရွှေဖြစ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » အမှိုက်က ရွှေဖြစ်။
Posted by Ma Ma on Oct 26, 2014 in Environment, My Dear Diary, Think Different | 27 comments
အမှိုက်ကရွှေဖြစ် ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကြားနေကျမို့ ထူးပြီးတော့ ဆန်းတယ် မထင်သလို ………..
ဒါပေမယ့် တကယ့်ကို လက်တွေ့ကျကျ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတာတွေကိုတွေ့လာရတော့လည်း တခြားသူတွေပါ သိစေချင်မိပါတယ်။
ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးသို့တစ်ခေါက်…………… myanmargazette.net/202209 ဆိုပြီး ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးမှာ အရင်တုန်းကလို မဟုတ်ပဲ အများပြည်သူအားကိုးအားထားပြုနိုင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲနေတာကို ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။
အခုလည်း ရွာသာကြီးစိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံရဲ့ လက်ထောက်ဆေးရုံအုပ် (ထင်တာပဲ) ဒေါက်တာဆန်းလင်းရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကတဆင့် စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံက လူနာတွေကို ပြုစုကုသတဲ့နေရာမှာ ပြောင်းလဲတိုးတက်တာတွေ အများကြီး သိရလို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါတယ်။
လှုပ်ရှားတွေကို အမြဲတင်ပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာဆန်းလင်း ရဲ့ တိုင်းမ်လိုင်းကတစ်ခုကို ပြရရင်……..
(Souvenir Shop (unit-2 ) ၀င်ငွေရတော့
အလုပ်တူတူဝိုင်းလုပ်ပေးသူ(လူနာ)တွေကို ဘဲသားဟင်းချက်ကြွေးမယ်ဆိုတော့၊ ထမင်းနဲ့ဟင်းက စားနေကြတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော် အသားများများနဲ့ကြော်ပေးပါတဲ့၊တယောက်က ခေါက်ဆွဲ တစ်ပိဿာကို ၀က်သား ၃-ပိဿာ နဲ့ကြော်ကြွေးတဲ့ ဒါမှ အသားများမှာတဲ့လေ –
ခေါက်ဆွဲကြော် စားချင်တဲ့သူ လက်ညိုးထောင်လို့ဆိုတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ – sister ဒေါ်သိဂီ က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျရင် ကြော်ကြွေးမယ်တဲ့.. ဟေး)
(Sun Lin ခေါက်ဆွဲ ၇ ပိဿာ ကို ၀က်သား ၃ ပိဿာ နဲ့ ကြော် ပြီးကြွေးလိုက်တယ်။)
ရွာသာကြီးစိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို သိချင်ရင် ဒေါက်တာဆန်းလင်း (Sun Lin) ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ၀င်ကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။
တခါတုန်းက စကားကြုံရင်း မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က
အမှိုက်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးလာပါတယ်။
အသုံးမ၀င်လို့ စွန့်ပစ်တာ အမှိုက်ပေ့ါ….
သူ့နေရာနဲ့သူ မရှိတာ အမှိုက်
ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ သူအသုံးဝင်မယ့်နေရာမှာရှိနေရင် တန်ဖိုးရှိပြီး
သူ့ကိုမလိုအပ်တဲ့ အခြားနေရာကို ရောက်သွားရင် အမှိုက်ဖြစ်သွားတယ် လို့ ပြောပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတစ်စောင်ကို မသိတဲ့သူက သာမန်စာရွက်ဟောင်းတစ်ရွက်လို့ထင်ပြီး လွှင့်ပစ်တာမျိုး ပေ့ါ။
ကိုယ်တိုင်က ဂေါက်ကလပ်ဝင်ပီပီ၊ အပျိုကြီးပီပီ ကပ်စေးနဲ ကုပ်ကုပ်စပ်တတ်တဲ့ ၀ါသနာဗီဇက ပြင်မရပါဘူး။
အနုပညာသမားတွေ ဆိုင်းသံကြားရင် က ချင်သလို………..
အစားအစာတွေ၊ ရေတွေ ပစ်စလက်ခတ် သွန်ပစ် စွန့်ပစ်နေတာတွေ့ရင် မနေနိုင် မထိုင်နိုင်နဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခိုးလိုးခုလု ဖြစ်ရပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်ပဲ အလဟဿ လွှင့်ပစ်ပြီး ဆုံးရှုံးရမှာတွေကို ချွေတာရင်ပဲ အကုန်အကျအများကြီး သက်သာပြီး (၀င်ငွေတိုးသလို) ငွေပိုငွေလျှံထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို ချွေတာရေးနဲ့ ငွေရှာရေး http://myanmargazette.net/59288 မှာ ရေးထားခဲ့ဘူးတယ်။
ရွာသာကြီးစိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကော်ဖီမစ်အိတ်ခွံလေးတွေကို Recycle လုပ်ပြီး လူသုံးကုန်ပစ္စည်းလေးတွေ ထုတ်လုပ်တာရှိပါတယ်။
လွှင့်ပစ်ရမယ့် ကော်ဖီမစ်အိတ်ခွံလေးတွေကို အမှိုက်ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးမရှိတဲ့အဖြစ်ကနေ တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်တာမို့ အမှိုက်က ရွှေဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးကို
အဲဒါကြောင့် ကော်ဖီမစ်အိတ်ခွံလေးတွေကို ဒေါက်တာဆန်းလင်းရဲ့ ဖေစ့်ဘုတ်မှာ အလှူ ခံနေတာကို အားလုံးသိအောင် မျှဝေပေးပါတယ်။
ပန်းနန်းအိမ်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ လက်မှုသင်တန်းတွင် ကော်ဖီမစ်ထုပ်အခွံလေးများအား recycling လုပ်ပြီး အသုံးတည့်မည့် ခိုင်ခံ့လှပသည့် လူ့အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း များ ပြန်လည်ပြုလုပ်သည့် နည်းပညာ လာသင်ပေးလို့ –
ဒီအိပ်ခွံလေးတွေ ဟာ တော်ရုံနဲ့ မပျက်စီးတတ်ပါ အဲ့ဒါကြောင့် ခိုင်ခံ့တယ်- ပြီးတော့ လှလဲလှတယ် –
သဘာဝ ၀န်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး ကိုလည်း ကိုယ့်လူတွေက တတပ်တအားပေါ့ –
* ညီညီညာညာ[ကတ်ကြေးနဲ့ညှပ်]ဖောက်ထားပြီး သန့်ပြန့်တဲ့ ကော်ဖီမစ်အိပ်ခွံ/နို့မှုန့်အိပ်ခွံ လေးများ လိုချင်ပါတယ်- လုပ်ငန်းနည်းပြဌာန – စိတ်ကျန်မားရေးဆေးရုံကြီး *
(ဒေါက်တာဆန်းလင်း ဖေ့စ်ဘုတ်က ကူးလာတာ)
ကိုယ်သုံးပြီး စွန့်ပစ်ရမယ့် အမှိုက် ( ကော်ဖီမစ်အိတ်ခွံ) လေးတွေကို စုဆောင်းပြီး လှူ ဒါန်းခြင်းဖြင့်…….
ကိုယ်တိုင်လည်း အမှိုက်ပစ်ရတာ သက်သာတယ်။
လူနာတွေကိုလည်း စိတ်အခြေအနေတိုးတက်စေတဲ့ ကုထုံးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။
စုပေါင်း စုဆောင်း လှူ ဒါန်းခြင်းဖြင့် အားပေးကြပါစို့လား။
ကော်ဖီမစ်အိတ်ခွံလေးတွေက နေ ဘာလုပ်လဲ ဆိုတာ လဲ သိချင်ပါတယ် ချစ်မမ ရေ့။
ဒီလို အပြင်မှာ လူတောမတိုးနိုင်တော့တဲ့ လူ တွေ ကို စိတ်စေတနာ နဲ့ ကူညီပေးနိုင်ကြဖို့ တကယ်ဘဲ လိုပါတယ်။
ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် ဒီ လို အရက်သမား၊ ဆေးသမား က နေ စိတ်ရောဂါ ဖြစ်နေသူတွေ က သူတို့ ဟာ သူတို့ သောက်ပြီး ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ တွေ မဟုတ်ဘဲ
ပါတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း ကိုပါ ဒုက္ခရောက်နေစေတာ။
ဒါကို မသိဟန်ဆောင်ပြီး လစ်လျုရှူ ထားလိုက်ရင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်း မှာပါ အရမ်း အန္တရာယ်ကြီး ပါတယ်။
ဒါမျိုး အတွက် အသေအချာ ကို မ ပပျောက်တောင် မများ အောင် ဝိုင်းပြီး ပညာပေး ကူညီ ပြီး လမ်းတည့် ပေးသင့်ပါတယ်။
ဒါမှ လူ နဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် သဟဇာတ အညမည ဖြစ်ပေါ့။ (နိုင်ငံရေး သိပ္ပံ စကား တွေ ကြားနေတုန်း) lol:-))
ဝက်သား နဲ့ခေါက်ဆွဲ ကြော် ကြွေးပါ လို့ ပြောတာ ကို သဘောကျလိုက်တာ။ :))
ကော်ဖီမစ်အိတ်ခွံလေးတွေကို ခေါက်ပြီး ဆွဲခြင်းလေးတွေ၊ ဓာတ်ပုံဘောင်တွေ၊ ခဲတံထည့်တဲ့ခြင်းလိုမျိုးတွေ ပြန်ယက်ပြီးရောင်းတာပါ မလတ်ရေ။
အဲဒါလေးတွေ က ခိုင် တယ်လား။
စစ်ကိုင်းမှာ အဲလိုကော်ဖီမစ်အိတ်နဲ့ ဖျာယက်ထားတာကို နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေ စိတ်ဝင်စားပြီး သွားကြည့်ကြတယ်။
ဈေးကို သေသေချာချာ မှတ်မိပေမယ့်၊ မှတ်မိသလောက်တော့ ဈေးကမသေးဘူး။
မလတ်သိချင်တာတွေကို ဒေါက်တာဆန်းလင်းဖေစ့်ဘုတ်မှာ သွားမေးကြည့်လိုက်အုံးမယ်။
.ရွာထဲမှာ နောက်ထပ် သဌေးတစ်ယောက်တွေ့ပြီဟေ့။ ပထမတစ်ယောက်က တီပဒုမ္မာ။ မျှစ်မ ပြောရင် မမှားစေရဘူး။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ချွေတာရုံနဲ့ သူဌေးမဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူဌေးတိုင်းဟာ ချွေတာတတ်တယ်။ အဲဒါ သူဌေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပင်ကိုစိတ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ ရွာထဲမှာ ချွေတာရေး တရားဟောတဲ့လူ ခုဆို၂ယောက်ရှိပြီ။
လူကြီးမိဘတွေရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှုနဲ့လည်း ဆိုင်မယ်ထင်တယ်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ထမင်းကို စားနိုင်ရုံပဲထည့်ဖို့၊ ထည့်ထားတာ ကုန်အောင်စားဖို့ အကျင့်ပါလာတယ်။
အဲဒီကမှ ကိုယ့်ရဲ့ ကပ်စေးနဲတဲ့ဗီဇနဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့ ရေကို ဒလဟော သုံးနေတာတွေ့ရင်လည်း မနေနိုင်ဘူး။ အသည်းယားပြီး ပြောချင်တာကို မနည်းထိန်းရတယ်။
ပြုံးရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့အတွေးတွေ အရေးတွေကို သဘောလည်းကျတယ်၊
အဲသလို ချွေတာတယ်၊လွှင့်မပစ်ရဘူးဆို စိတ်ဝင်စားပြီးသား။
လူလည်း သူ့နေရာနဲ့သူမရှိရင် အမှိုက်ပေါ့နော်။
သတ်သတ်လွတ် သူတော်ဆင်ကြောင်ကြီးဆိုတော့လည်း……….. :hee:
အမတော်နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မတော့ သူဌေးဖြစ်ဖို့မလွယ်မှန်း သိလိုက်ရတယ် …
အိမ်မှာ အမေနဲ့အဖေက ကျွန်မကို စိတ်တိုတဲ့အခါတိုင်း သူဌေးသမီးလို့ ခေါ်လေ့ရှိတယ် … ငေါ့ပြီးခေါ်တာလေ .. မနှမြောတတ်လို့ … အသုံးမလိုဘူးထင်လိုက်တိုင်း လွှင့်ပစ်ဖို့ဝန်မလေး (ပေးပစ်ဖို့လဲ ၀န်မလေး) ..
တစ်နှစ်တစ်ခါ နှစ်သစ်ကူးရင် အဟောင်းတွေ လွှင့်ပစ်ပြီး အသစ်ဝယ်ဖို့ စလုံးမှာ မူလတန်းကလေးတွေက အစ ကျောင်းတွေက သင်တယ်တဲ့။
အသုံးမလိုရင် လွှင့်ပစ်၊ ဒါမှမဟုတ် အသုံးလိုမယ့်သူကို ပေးပစ်တာလည်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပဲ။
.အမှိုက်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးလာပါတယ်။
.အသုံးမ၀င်လို့ စွန့်ပစ်တာ အမှိုက်ပေ့ါ….လို့ ပြန်ပြောတော့
.သူ့နေရာနဲ့သူ မရှိတာ အမှိုက် တဲ့။
.အသုံးမပြုဖြစ်ပဲ ကိုယ့်ဆီရှိနေရင် အမှိုက်ပါပဲ
.တွေးကြည့်လိုက်မှ ကိုယ့်အိမ်မှာလည်း အမှိုက်တွေမနည်းမနော :p:
သူ့နေရာ သူမနေ.. ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ဝင်ပါဓာတ်တဲ့ ဦးမာမွတ်ကို ဘာသက်မှက်မဲ ဦးဦးမိုက်..
ဓမ္မဗျူ ဟာက ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင့် ပြောဖူးသလို ဘာမဟုတ်တဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်လေးလည်း မပစ်ရက်နဲ့ စုထားလိုက်တာ ပြန်စစ်ကြည့်တော့မှ အမှိုက်တွေ တောင်ပုံရာပုံ။
ယောက္ခမ မနိုင်လို့ ကိုမိုက်ကို မဲ နေတာလား။
ကုမ္ပဏီတွေကသာ Promotion Item အနေနဲ့ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရင် ဒါဟာ ဆန်းလဲ ဆန်း အားလဲ ပေးပြီးသားဖြစ် တွင်လဲ ပိုတွင်ကျယ်သွားမယ်.. ထင်တယ်…
ကော်ဖီမစ်အိတ်ခွံလေးတွေကို သုံးတာဟာ ပလပ်စတိတ်ပရင့်တင်းလုပ်ပြီးသား ပရောဒတ်တစ်ခုကို အလကားမတ်တင်းရလိုက်တာပဲ။
ကုပ္မဏီတွေအနေနဲ့လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုတွင်ကျယ်နိုင်ပေမယ့် တနိုင်တပိုင်လုပ်သလောက်စရိတ်မကျဉ်းနိုင်ဘူး။
ဒါ့အပြင် ဒီကိစ္စကို ကုပ္မဏီတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့လည်း လိုသေးတယ်။
တစ်ဦးချင်းစီကျတော့လည်း စုဆောင်းတာက အပန်းမကြီးပေမယ့် ရွာသာကြီးအထိသွားပို့ရမယ်ဆိုတာက မလွယ်လောက်ဘူး။
အဲဒါကြောင့် စုထားပေးရင် ကိုယ်က တာဝန်ပြီး သွားပို့ပေးမယ်။
(သို့) ဒေါက်တာဆန်းလင်းနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ (သူတို့ဆီကို လှူ နေတဲ့) သူတွေကတဆင့် ပို့ပေးမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
ဟုတ်ဘူး.. မမရဲ့.. ကျွန်တော် ပြောတာက ဒီလို.. သူတို့လုပ်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ပွဲတွေမှာ Dealer တွေကို လက်ဆောင်ပေးတာတို့ ဘာတို့ ဒါဆို တွင်ကျယ်တယ်လေ… ဈေးလဲ တော်တော်တန်တန်ရမယ်လေ… ဒါကိုပဲ ဘယ်က ရလဲ သိရင် တန်ဖိုးထားချင်တဲ့ သူက တန်ဖိုးထားမယ်လေ… ဒါကိုမှ ငါတို့ ဘရန်းက အခွံလေးတွေရှာစုပြီး လုပ်ပေးပါဆို… လက်ဆောင်က ပိုကောင်းသွားမယ်လေ… ဒါကို ပြောချင်တာပါ…
တချို့ကုပ္မဏီတွေ ဘူးခွံ အိတ်ခွံနဲ့ ပစ္စည်းပြန်လဲပေးတာမျိုးကို ပြောတာ ထင်လို့။
ပြည့်ရှင်မင်းပြောတဲ့ နည်းက ပိုကောင်းတယ်။
(ကောင်းမှာပေ့ါ ပြည့်ရှင်မင်းပဲလေ။ ကိုယ်တိုင်မေး၍ ကိုယ်တိုင်ဖြေသွားသည်။)
ဘာပစ္စည်းတွေရလဲ.. ဘာတွေ ထပ်မှာလို့ ရလဲ… ဘယ်လောက်လဲ.. ဘယ်လိုပုံလဲကို.. ပို့စ်တင်ပေးပါနော်.. ကျွန်တော် ကံသေကံမ မပြောနိုင်သေးသော်လဲ ကြည့်ချင်လို့ပါ…
အိတ်ခွံတွေ စုတော့ စုထားလိုက်မယ် လိုရမယ်ရ
recycle လုပ်လို့သုံးလို့ရတယ် သုံးတဲ့သူလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့
အသုံးမ၀င်ရင် အမှိုက်ဆိုရင်တော့ ကျမလည်း ရှင်းရအုန်းမယ်
လူအမှိုက်ကတော့ လောကကြီးမှာ အဆိုးဆုံးပဲထင်တယ် မယ်ပုရေ။
ပြောမယ့်သာ ပြောရတယ် ကိုယ်လည်း အဲဒီထဲမပါအောင် ကြိုးစားရအုံးမယ်။
စိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံက.. လူတွေလုပ်တဲ့.. ရီဆိုင်ကယ်ထွက်ပစ္စည်းတွေဆိုပြီး.. ရောင်းရင်ကို.. တော်တော်ဈေးကောင်းမယ့်သဘောရှိတယ်..။
လိုဂို.. နာမယ်တခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့.. ထုတ်ရောင်းသင့်တယ်…။
စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာ နှစ်ရှည်လများ ကြာနေပြီး ရောဂါသက်သာပေမယ့် ပြန်စရာ အိမ်မရှိ၊ အိမ်က ပြန်လာမခေါ်တာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အဲလိုလူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လူနာလို့ ထင်ပြီး စိတ်အားငယ်နေကြရမယ့်အစား အခုလို လက်မှုပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုအတတ်ပညာသင်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်နေကြတာပါ။
မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြန်ကမ်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ အော်ဒါရတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒေါက်တာဆန်းလင်းဖေစ့်ဘုတ်မှာ ထုတ်ကုန်တွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး အားပေးချင်ကြသူတွေက မေးမြန်းစုံစမ်းထားတာတွေရှိတယ်။
အမှိုက်ကစ ပြဿာဒ် မီးမလောင်ရင် ပြီးတာပဲ